We She Me: မတောက်လိုက်ရသော Old Flame များ (၁)
shin - 8/29/08, 12:41 PM
ha ha ha...so funny...Writeaweb page to chaseagirl. I think it'll be useful only toaprogrammer girl...
Anonymous - 8/29/08, 1:05 PM
A Kyaung Thi Tway Naw, Kyan Nay Thay Dar Tway Shi Thay De`, himm himmm
Moe Cho Thinn - 8/29/08, 1:12 PM
Pratical တွေ တော်တော်လုပ်ပြီးလို့ ဒီ theory ထွက်လာတာ ထင်ပါရဲ့။ :Pအခုလို ရိုးသားပွင့်လင်းတာကိုလည်း သဘောကျတာပါမှာပါလေ..။
မဇနိ - 8/29/08, 4:43 PM
မစွံသေးတဲ့သူတွေ ဒီလက်ချာနဲ့ လှုပ်ရှားတော့မယ် ထင်တယ်နော်
ပို့စ်ဖတ်ပြီးတော့ “ဂေါက်“ အသံကြားလိုက်ရတယ်၊
မဇနိက ကိုဇနိကို ထုတာလားတော့ မပြောပြဘူး။
ဇနိမောင်နှံ ဟုတ်ဘူးနော် စိတ်ဆိုးရင် ကလေးနှစ်ယောက် မ သွားလိုက်မှာဗျ။
ဒါနဲ့ မတောက်လိုက်ရသော မီးတောက်များ ဘယ်နှစ်တောက်ပါလိမ့် “တိန်“
Anonymous - 8/29/08, 5:56 PM
hahaha so funny. one guy give me flowers on my birthday but he forgot to take out receipt. so how? hehe
Andy - 8/29/08, 7:12 PM
တိုက်ဆိုင်လိုက်တာဗျာ..ကျွန်တော်လဲ အစ်ကို့လို ခံရဖူးတယ်ဗျ ဟီဟိ ဘယ်လောက်တိုက်ဆိုင်လဲ ဆိုကျွန်တော်လဲ ကွန်ပြူတာကပဲ..အဲဒီလိုလေးတွေလုပ်ပေးတာလဲ တူတာပဲ...နောက်ဆုံး လှေကြီးထိုးနဲ့မှ စွံသွားတာလဲတူတာပဲ (nick name ပေးတာချင်းတောင်လာတူနေတယ်... ဘုရား ဘုရား...)
Anonymous - 8/29/08, 10:33 PM
little moon - 8/30/08, 12:36 AM
ကျောင်းတုန်းကတော့ အဲဒီလိုလုပ်ရကောင်းမှန်းလဲမသိပါဘူး။ ကိုယ်တို့တုန်းကတော့ ICST ပေါ့။ ကွန်ပျူတာတွေ program တွေကသတ်သတ် ကောင်မလေးတွေက သတ်သတ်။ ကွန်ပျူတာတွေ program တွေကိုပဲ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ အရူုးအမူးဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒါကြောင့်လဲ ကျောင်းသားဘ၀ကာလကမှာ မစွံခဲ့တာပေါ့ :D
Anonymous - 8/30/08, 8:28 AM
ဦးလေးက အချက်အပြုတ်လဲ တော်တော့
မပိုးဖူးဘူးလား ? :-P
khin oo may - 8/30/08, 10:38 AM
တို.မြင်တာ ကတော. ခင် မင် အောင် အရင် လုပ် သင်.တယ်။ ပြီး မှ ရင်းနှီး အောင် လုပ် စာ ကို ပြီး မှ ပေးရင် ပေးပေါ.။ တို.ဆိုရင် တော. ဖွင်.ပြော တာ ကို ကြိုက် တယ်။
ရည်းစားဖြစ်ပြီး ရင် ဘာ လို အဆင့်တက် ရ သလဲ ဆို တာ လဲ ခလေး တွေ ကို သင်ပေးဦးလေ.။။
လုလု - 8/30/08, 4:28 PM
Anonymous - 8/30/08, 5:52 PM
၁၉၉၁ လောက်မှာ Pascal Program နဲ့ စာကြောင်းလေးတွေကို Scroll Up လုပ်ပြီး ပေးလိုက်တဲ့ ရည်းစားစာနဲ့ ပထမဆုံး တရားဝင် ရည်းစားကို ရပါလေရော..
တခုပဲ...သူမက Program run ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတာနဲ့ အနားမှာ ရှိတဲ့ အကိုကြီးတစ်ယောက်ကို ခေါ် Run ခိုင်းတော့ တစ်ကျောင်းလုံး သိသွားရောဗျို့။
May Moe - 8/30/08, 7:01 PM
"ကံကောင်းရင် စာကိုတောင် တစ်သက်လုံး သိမ်းထားချင် သိမ်းထားဦးမယ်။" ဟီး ဒါ သူများကိုစောင်းပြောတာပဲ :P
Andy Myint - 8/30/08, 7:34 PM
I should have realized it ... shin ... thanks :)
အကြောင်းသိရေ.... ကျန်တာတွေ ပါမစ်ကျတာနဲ့ တင်လိုက်မယ်ဗျာ
ဟီးဟီး Pratical တွေကနေTheory ထွက်လာတာ .. ဟုတ်သလိုပဲ မမိုးချိုသင်း
မဇနိကလည်း သမီးရည်းစားကို `မောင်နှံ´ သုံးလို့ ရ၀ူးလား။ ကျွန်တော့် အမြင်မှာ လိုက်ဖက်လွန်းလို့ `မောင်နှံ´ သုံးလိုက်မိတာပါ။
Yeah.. it could happen.. Lady Reader.. but he is even better than me... I reckon
တိုက်ဆိုင်ချက်ကတော့ဗျာ လက်ဖျားခါတယ် Andy ရာ
ထိန်ချန်မှုနဲ့တော့ တရားမစွဲလိုက်ပါနဲ့ စာဖတ်သူရယ်.. ကျန်တာတွေ နောက်ဖြည်းဖြည့်းပေါ့ အဟီး။
ကျွန်တော်က နှစ်ခုစလုံးနဲ့ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ ဖြစ်ခဲ့တာ ကိုထွန်းခိုင် အဟီး
ဟိုက် ဓါတ်သိတွေပါလား ဒွတ်ခပဲ။ ဒံပေါက် ချက်တာတွေ ဘာတွေ သိနေပါလား စာဖတ်သူ။
မမခင်ဦးမေတို့ကတော့ ပိုင်တယ်။ အစ်မကိုသာ စောစော သိခဲ့ရင် တိုင်ပင်လို့ ရသေးတယ်နော့်။
ပါမစ်ကျတာနဲ့ ရေးလိုက်မယ် မလုလု.. နောက်တာနော် အတည်မမှတ်နဲ့
ဟာ..ပိုင်တယ် နောင်တော်ရာ။ ကျွန်တော့် အလှည့်ကျတော့ ဘာလို့ မတောက်တာတုန်း..ဟင်း
စက္ကူဈေးတွေ တက်တဲ့ အထိသာ သိမ်းထား ညီမ မေမိုးရေ။ ဈေးကောင်းရမှ ထုတ်ရောပေါ့ဗျာ။
Anonymous - 8/31/08, 1:16 AM
မိုးချိုသင်း ဆိုတာ ဆရာဦးတင်မိုး ရဲ့ သမီးပါလား ခင်ဗျာ?
Anonymous - 8/31/08, 6:51 AM
Waiting for part 2, 3, 4, 5,6etc.
Mhaw Sayar - 9/8/08, 5:34 PM
ကိုအန်ဒီ. မိန်းမပိုးနည်းလည်း ရသကိုးဗျ. :P
Andy Myint - 9/8/08, 9:46 PM
ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ မမိုးချိုသင်းက ဆရာဦးတင်မိုး သမီးပါ စာဖတ်သူ။
Coming soon, Everest...
မရပါဘူး မှော်ဆရာရေ... လျှော်တဲ့ အကြောင်းတွေပါ ဟားဟား။
Anonymous - 9/8/08, 11:45 PM
ဦးတင်မိုး ရေးတဲ့ "ဗုဒ္ဓနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း" ဆိုတဲ့ ကဗျာ ဘယ်မှာ ဖတ်လို့ ရနိုင်ပါလဲ။ သိရင် ညွန်ပြပေးပါ။
သိင်္ဂါရ - 9/9/08, 1:44 PM
ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဖတ်ရတဲ့ ဘလော့လေးပါပဲ..
ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်က ဆိုတော့ ဘယ် Batch ကလဲ ဟင်..
တန်ခူး - 9/12/08, 4:31 PM
ကိုအန်ဒီ... (၁) ကို ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်… ကိုအန်ဒီမှန်ပါတယ်… တခါတခါ ရှေးရိုးအတိုင်း မလိုက်တာကိုပဲ သူများတွေလို မဟုတ်ဘူး… သူများတွေလောက်မှ ချစ်တတ်ရဲ့လား… ဒါမျိုးတွေ တွေးတတ်တာမိုလား… မရှက်တမ်းဝန်ခံရရင် ကျွန်မတို့ လဲ စာပေးတဲ့နည်းပဲဗျို့ … သူက စပေးတာနော်… တလွဲမတွေးနဲ့ ဦး…
Andy Myint - 9/15/08, 4:53 PM
ကျွန်တော် မသိပါဘူး စာဖတ်သူ။
ကျွန်တော် ICST 8Th Batch က လို့ ပြောလို့ ရပါတယ် သိင်္ဂါရ။
ဟီးဟီး… မတန်ခူး တို့လည်း ဂလို ဂလို ကိုး